Nepal Dayari | हेर्नुस् ! कुवेतमा बन्धी बनाएकी नेपाली चेली आमासँग बिल्न पाउदा यस्तो भावुक भइन् (भिडियो हेर्नुस्)
हेर्नुस् ! कुवेतमा बन्धी बनाएकी नेपाली चेली आमासँग बिल्न पाउदा यस्तो भावुक भइन् (भिडियो हेर्नुस्)
मंग्सिर ११, २०७८ शनिबार २६६ पटक हेरिएको
मकवानपुर जिल्ला मनोहरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा घर भएकि सृजना प्रजा नाम गरेकी एक महिला वैदेशिक रोजगारको क्रममा आजभन्दा चार बर्ष पहिला कुबेतमा गएकी थिइन । केहिदिन अघिमात्र उनी आफुलाइ चार बर्षदेखि एउटा घरमा ब’न्धक बनाइएको भन्दै आफ्नो दु’खे’सो पोख्दै भिडियोकल मार्फत मिडियाकर्मिसग जोडिएकी थिइन । मिडियाकर्मिसग भएका उनका कुरा सुन्दा उनी निकै ठूलो सं’क’टमा रहेको हामिले बुझ्छौ ।
अब त घर फर्किने आशा नै म’रि’स’केको बताउने उनको साथमा अहिले पासपोर्ट पनि छैन । घरमा बालबच्चाहरु छ्न, बुढी सासुआमा निकै समस्या परेको बताउथिन उनी । फोन ईन्टरनेटबाट समेत टाढा राख्छ्न उनलाइ, क’ठै ब’रा ! कु’ट’पि’टसहित अनेक ध’म्कि दिएर पुरै अ’धि’नमा राखेका रहेछ्न उनलाई । यसैक्रममा आज मिडियाकर्मी अमृतमान ओलि उनको घरको अबस्थाबारे बुझ्न उनको घरसम्म पुगेका छ्न । आज भने मिडियामा सृजना छोरिहरुको साथमा उनका बाबुआमा पनि आएका छ्न ।
लामो समयको अन्तरलालपछि छोरीसग यसरि भिडियोकलमा प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँदा म’ख्ख परेका छ्न सृजनाका बाबुआमा । सृजनाको अबस्थाबारे निकै चि’न्ति’त छ्न उनका बाबुआमा । सिते प्रजा नाम गरेका उनका बाबुले आफ्नो छोरिको श्रीमानले पनि अर्को बिबाह गरेको भन्दै चि’न्ता व्यक्त गर्छन उनी । छोरिलाइ कसरी फिर्ता ल्याउनु भन्दै चि’न्ता व्यक्त गर्छन उनि ।